IHighlanders Yiyo Esikhokhela Engalaneni Yemiklomelo kuPSL
Isimo sengalane yemiklomelo esigabeni semidlalo yenguqu yaphezulu ese Premier Soccer League siveza ukuba amaqembu amakhulu elizweni athi ele Highlanders, ele Dynamos kanye lele CAPS United yiwo ahlezi phezulu ngemva kwemidlalo elitshumi lantathu.
Iqembu le Highlanders lihlezi esiqongweni sengalane lilemiklomelo engamatshumi amabili lane-24, kuthi endaweni yesibili kuhlezi iqembu le Dynamos lona elilingene ngemiklomelo leqembu elihlezi kundawo yesithathu ele CAPS United womabili lawamaqembu elemiklomelo engamatshumi amabili lantathu (23).
Iqembu ebelikhokhela ensukwini ezedluleyo ele Hwange lihlezi kundawo yesine lilemiklomelo engamatshumi amabili lambili (22) njalo lilingene lele How Mine elikundawo yesihlanu.
Endaweni yesithupha kuleqembu le ZPC Kariba lona elilemiklomelo engamatshumi amabili lanye kuthi ngemva kwalo kuleqembu le Chicken Inn elilemiklomelo engamatshumi amabili.
Kundawo yethoba munwe mbili kuleqembu le Shabanie Mine elilemiklomelo elitshumi lathoba munwe munye lona lilandelwa ngele FC Platinum elilemiklomelo elitshumi lathoba munwe mbili.
Iqembu le Buffaloes lihlezi kundawo yetshumi lilemiklomelo elitshumi lesikhombisa kuthi ngemva kwalo kuleqembu le Chapungu elilemiklomelo elitshumi lanhlanu.
Endaweni yetshumi lathoba munwe mbili kuleqembu le Bantu Rovers elilemiklomelo elitshumi lantathu njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le Triangle.
Iqembu le Black Rhinos likundawo yetshumi lane njalo lilemiklomelo elitshumi lambili ngaphansi kwalo kuleqembu le Harare City elilemiklomelo elitshumi lanye ikanti iqembu elijeke amanye emsileni wengalane ngele Chiredzi elilemiklomelo eyisikhombisa kuphela.
Amaqembu amela amazwe athi ele Nigeria kanye le Algeria yiwo asethwele amathemba ezwekazi lase Africa kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni le Brazil kulezinsuku.
INigeria le Algeria yiwo aphumelele ukuphuma kusigaba sezibaya kulumncintiswano kwathi amanye amazwe amathathu lawo abemele izwekazi kulimidlalo athi iGhana, iCote D'Ivoire kanye le Cameroun abhekise amabombo aphindela ekhaya.
Namhla ke emdlalweni wantambama iqembu le Nigeria lidibane lele France kuthi emdlalweni ozakuba sebusuku ngehola letshumi iAlgeria izadibana le Germany.
Amaqembu asefinyelele esigabeni se quarter - final ngathi ele Brazil, ele Netherlands, ele Colombia, kanye lele Costa Rica.
Kusasa ngosuku lwakuqala olwenyanga kaNtulikazi iqembu le Argentina lizangqikilana lele Switzerland kuthi iBelgium izadlala le United States of America kuthi imidlalo yesigaba se quarter - final izaqala mhla zine kunyanga kaNtulikazi.
Sikhangele umdlalo werugby
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni werugby eyohlobo oludlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu liqale kuhle umkhankaso walo wokuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo ngokunqoba elikwenze ele Madagascar nge 57 ka 22 ngoMgqibelo khonale eMadagascar.
Iqembu le Zimbabwe lizadlala leqembu le Namibia ngoLwesithathu libeselidlala umdlalo walo owokucina ngeNsonto lapho elizangqikilana khona lele Kenya.
Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lihlezi phezu kwengalane lizaphakamisa inkezo ye Africa Cup liphinde njalo lithole ilungelo lokuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni leNgilandi ngomnyaka ozayo.